फेरि देश घाइते हुनेछ::Best News Experience from Nepal
फेरि देश घाइते हुनेछ
– सुर्य प्रसाद खनाल
जन्मदैमा सरकारबाट अन्याय हुनु पर्ने कारण के ? के एक गरिब ब्राह्मण परिवारको छोरा छोरि भएर जन्मीदा जन्म पूर्वकै पाप को सजाए दिनु पर्छ उसलाई ? साच्चै विभेद त राज्य बाट भएको छ । एक गरिबले खान नपाएर छटपाटाइरहदा अर्काे धनाढ्य परिवारलाई जातका आधारमा कोटाको व्यावस्था गरि सुविधाको थुप्रो थपार्ने सरकार तेरो कस्तो समानताको निती ? गाँउमा बिहान-बेलुका खानको लागि कुनै १६ बर्षे जवान ज्याला मजदुरि गर्न विवस छ, पढ्ने लेख्ने त परको कुरा तर सरकार तेरो विभेदकारी आखाँले त्यसलाई किन सम्पन्नसाली देखेर शहरमा बस्ने एक हुने खाने तर दलितको छोरालाई निशुल्क पढ्ने व्यवस्था मिलाइरहेछस ? के तेरो आखाँमा त्यो पढ्न नपाएर बिहान-बेलुकाको छाक टार्नका लागि गैटी पर्दार्ने बाहुनको छोरा यो देशका युवा होईन र ? के जातीय आधारमा बाढेको कोटा प्रणाली साँच्चै विभेदकारी भएन र ? के यसरि पनि समानता हुन सक्ला ?
आज ९० प्रतिशत नम्बर ल्याएर डाक्टरमा पास भएको एउटा युवा बाहुन हुनुको कारण ६० प्रतिशत नम्बर ल्याउने सँग हारेर बस्नु कत्तिको पीडादायी होला ? के त्यो ९० प्रतिशत ल्याउने बाहुन ६० प्रतिशत ल्याउने भन्दा कमजोर छ ? की जातीय आधारमा बाहुन हुनको कारण फेल हुनु जरुरी छ ? के त्यो ९० प्रतिशत ल्याउनेले जत्तिकै बिरामीको सेवा गर्न सक्ला ६० प्रतिशतले ? एउटा बिरामीको सफल अपरेसनको परिणाम एउटै होला ?
सरकार सक्छस भने जातका आधारमा होइन धनि र गरिवको वर्गिकरण गरिदे र गरिवलाई सुविधा दिएर उकास । हैन भने यस्ता विभेदकारी कदमले समानता आउदैन । जातिय आधारमा विभेद भएको स्पष्टता झन झन बुझ्दै जानेछन जनहरुले र देशमा जातिय द्धन्द्धको राको बोल्ने छ । समानता होइन युद्ध हुने छ । विकास होइन विनास हुनेछ । शान्ती होइन मारमार हुनेछ । र देशको उपचार होइन फेरि देश घाइते हुनेछ ।
सन्दर्भ विश्व रेडियो दिवश…….
टिप्पर संचालन स्वरोजगार संगै चुनौती
दशैमा नयाँ कपडा: घर–घरमा झगडा
भारतीय पुर्व अर्थमन्त्री अरुण जेट्लीको निधन
नयाँ दिल्ली । पूर्व अर्थमन्त्री तथा भारतीय जनता पार्टी (बिजेजी)का वरिष्ठ...
२८ वडामा सचिवबिहीन
दाङ । दाङका एकसय वडामध्ये २८ वडामा अझै सचिव पुग्न सकेका...
ट्रकले किच्दा साइकल यात्रीको मृत्यु
बुटवल । बुटवलको ट्राफिक चोकमा ट्रकले साइकल यात्रीलाई किच्दा एक जनाको...
लुम्बिनीमा पर्यटकको ओईरो लाग्छ : मन्त्री लिला गिरी
बुटवल । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन र लुम्बिनी संगै जोडिएका बुद्धत्वका स्थानहरुमा...
डुंगामा आगलागी हुँदा २२ बेपत्ता
इन्डोनेसिया । इन्डोनेसियाको जाभा टापुमा दुई सय ७७ यात्री बोकेको एक...
वर्षा र बाढीबाट सुडानमा ५४ को मृत्यु
जेनेभा। अत्यधिक वर्षा र बाढीका कारण सुडानमा पछिल्लो समय ५४ जनाको...